China Neoprene ဒူးခေါင်းစွပ်အင်္ကျီကိုစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ကွမ်းခြံကုန်း
လက်မှတ်:အီး, FDA က, ISO90001
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: နီအိုဖရန် ဒူးလက် ထောက်ခံမှုလက်ကောက်ခြေစွပ်
- Hot Sale ဒူးထောက်ဒူးခေါင်း, ဒူးထောက်, ဒူးခေါင်း ပျော့ပျောင်းသောပါးလွှာသောအလင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ ကြာရှည်ခံသည့်ပစ္စည်းများသည်ဤအားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်နေစဉ်ဒူးခေါင်းအတွက်သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးအထူးပြုလုပ်ထားသောအားကစားလက်ဝှေ့ဒေါက်ဖိအားပေးမှုအားအထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ - စိတ်ကြိုက်လိုဂိုသို့မဟုတ်တံဆိပ်ကိုရနိုင်သည်။ -Mok MOQ! - စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းအတွက် NDA ကတိပေးထားသည်။ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အမြန်ပေးပို့နှင့်အတူ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုတ်လုပ်မှု!
ပစ္စည်း: Spandex, Polyester, နိုင်လွန် အရောင်: အဝါရောင် / အနက်ရောင်အစိမ်းရောင် / အနက်ရောင်လိမ္မော်ရောင် / အနက်ရောင် အရှည်: 32cm အရွယ်အစား: SML XL အသုံးပြုမှု: လေ့ကျင့်ခန်း, အားကစား, medica, နွေး, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အရိုးအထူးကု လိုဂို: တံဆိပ်ကြိုဆိုသည် နမူနာအချိန်: 3-10 ရက် ခဲအချိန်: 15-30 ရက် ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: Opp အိတ်, 100Pcs / ပုံး
အကောင်းဆုံးစံနမူနာယူစရာ Neoprene ဒူးထောက်လက်ရှည်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကိုရှာဖွေနေပါသလား။ သင်၏ဖန်တီးမှုကိုကူညီရန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Knee Brace Wholesale သည်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကတရုတ်မူလအစ Neoprene စက်ရုံဒူးထောက်။ Brace။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
compression နိုင်လွန် elastic ဒူးထောင့် Brace Sl ...